४० लाख लगानीकर्ता सडकमा आइसके, शेयर बजारको सुधार गर्नैपर्छ : गगन थापा | आर्थिक अभियान
४० लाख लगानीकर्ता सडकमा आइसके, शेयर बजारको सुधार गर्नैपर्छ : गगन थापा
असार १, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले शेयर लगानीकर्ताले राखेको मागमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
४० लाख लगानीकर्ता अहिले सडकमा उत्रिएको भन्दै उनले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन् । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले धितोपत्र बजारलाई कसैले पनि वेवास्ता गर्न नहुने बताए ।
‘साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले के काम गरिरहेका छन् ? त्यसको जवाफ चाहियो’, उनले भने, ‘४० लाख लगानीकर्ता सडकमा आउने बाध्यता कसरी भयो ? यसको पनि जबाफ चाहिन्छ । अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेरिएको धितोपत्र बजारमा सबैको ध्यान जान जरुरत छ ।’
पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक २ हजार विन्दुभन्दा तल झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमले धितोपत्र बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै लगानीकर्ताहरू १९ बुँदे मागसहित अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
U4TssAU03Lc is the repalced by NsUiYZ9JlpU